Nidaamka waxbarasho ee Finland oo lagu tilmaamay in uu yahay kan kaalinta ugu fiican ku jira dunida - Horn Future
Nidaamka waxbarasho ee Finland oo lagu tilmaamay in uu yahay kan kaalinta ugu fiican ku jira dunida
Helsinki –Nidaamka waxbarashada ee dalka Finland ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kan kaalinta ugu fiican ku jira adduunka oo dhan.
Natiijooyinka imtixaanada ee heerka caalami ayaa waxa dalka Finland uu galay safka hore ee dunida iyada oo la sheegay in la sugay in ay jirto farqi yar oo u dhexeeya dugsiyada iyo ardayda.
Waxa kale oo la sheegay tayo gaar ah oo uu gaadhay nidaamka waxbarashada ee Finland iyo sido kale hufnaanta macallimiinta iyo madax-bannaanidooda,halka sido kale la sheegay in tixgalintu ay ka timiday falsafad waxbarashada laftigeega.
Waxa dhammaan dugsiyada dawlada iyo kuwo bilaahska ah ay yihiin kuwo siman oo aynan jirin dugsiyo ka horeeyay kuwo kale ama tixgalin gaar ah lasiiyo.
Dhammaan dugsiyada ayaa ah kuwo waxbarashadoodu ay tahay mid tayo leh sida waafaqsan mabaadii’da caddaaladda ee waxbarashada iyo sinnaanta fursadaha,iyada oo macalimiinta waxbarashada aasaasiga ah ay ardayda la qaataan muddada waxbarashada sanado badan, si ay u oggaadaan meelaha ay ka liitaan iyo meelaha ay ku horeeyaan.
« Dhimashadii ugu ba’nayd ee ka dhacda xabsi kuyaala dalka Brazil iyo maxaabiista qaar oo qoorta laga gooyay	» Rabshado ka dhacay xero qaxooti oo kutaala Italy kadib geerida ku timid haweenay kamid ah qaxootiga